Politika amin'ny fiainana an-tserasera
Ity Politika ity dia mamaritra ny fomba famangiana, fampiasana, ary fizarana ny mombamomba anao manokana rehefa mitsidika na mamidy amin'ny www.buddhatrends.com (ny "Site").
- "Fangataham-pandrafetana" ny fitantanana ny zava-mitranga ao amin'ny tranokalam-pifandraisana, ary manangona tahiry, anisan'izany ny adiresy IP, ny karazana navigateur, ny mpizara amin'ny Internet, ny pejy mifampitohy / fivoahana, ary ny takelaka daty / ora.
Ankoatr'izay, rehefa mividy na manandramana mividy amin'ny Site, dia manangona fampahalalana sasantsasany avy aminareo izahay, anisan'izany ny anaranao, ny adiresy faktiora, ny adiresy fandefasana, ny fampahafantarana ny fandoavam-bola, ny laharana finday, ny adiresy mailaka, ary ny laharan'ny finday. Miantso ity vaovao ity isika ho "Information Information".
- Farito ny baikonay ho an'ny loza mety hitranga na hosoka;
Farany, afaka mizara ny mombamomba anao manokana ihany koa izahay mba hanaraka ny lalàna sy fitsipika azo ampiharina, hamaly ny fangatahana, ny fanamarinana fikarohana na ny fangatahana araka ny lalàna amin'ny vaovao azonay, na ny fiarovana ny zontsika.
Araka ny voalaza etsy ambony dia mampiasa ny fampahalalam-baovao manokana anao ianao mba hanomezanao dokam-barotra mibaribary na fifandraisana ara-barotra izay inoantsika fa mety mahaliana anao. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny asan'ny dokam-barotra kinendry ianao dia afaka mitsidika ny pejy fanabeazan'ny Network Advertising Initiative ("NAI") amin'ny http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Ny tranokala dia tsy natao ho an'ny olona izay tsy ampy taona 18
Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fomba fiainanao manokana momba ny tsiambaratelo ianao, raha manana fanontaniana, na te hiantso fitarainana, azafady mba antsoy amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny support@buddhatrends.com na amin'ny alalan'ny fampiasana ny antsipiriany omena etsy ambany:
[Re: Privacy Compliance manamboninahitra]